အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေမှ ငွေကျပ်သန်း ၆ဝဝဝ ကျော် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု အပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင် - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပေးပို့ထားသည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေပါ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၈၁၇၅ ဒသမ ၂၇၂ သန်းအတွင်းမှ ငွေ ကျပ် ၆၂၇၈ ဒသမ ၁၁၂ သန်း ခွဲဝေသုံးစွဲမှုအပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က ဇူလိုင် ၂၅ ရက် တွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယ နေ့တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၈၁၇၅ ဒသမ ၂၇၂ သန်းအတွင်းမှ ကျပ် ၁၈၉၇ ဒသမ ၁၆ သန်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွဲဝေသုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံအကြားအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ ထောက်ပံ့တဲ့ ထောက်ပံ့ငွေ ဂျပန်ယန်း ၂၂၆၃ သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပရောဂျက်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ခြောက်လတာ ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်ကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ပေးပို့ ခဲ့စဉ်မှာ Broadcasting Equipment ပစ္စည်း များ ဝယ်ယူရမယ့် ဘတ်ဂျက်ငွေပမာဏကို တိကျစွာ မသိရှိရသေးတဲ့အတွက် လျာထားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆူမီတိုမိုကော်ပိုရေးရှင်းက ဂျပန်ယန်း ၁၉၆၉ သန်းနဲ့ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆိုသည်။ စာချုပ်ပါအချက်များအရ စက်ပစ္စည်း များအတွက် ကြိုတင်ပေးချေရန် ဂျပန်ယန်း ၄၆၉ ဒသမ ၉၁၇ သန်းနှင့် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည့် ဂျပန်ယန်း ၄၆ ဒသမ ၈ သန်း၊ စုစုပေါင်း ဂျပန်ယန်း ၅၁၆ ဒသမ ၇၁၇ သန်း ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ အတွင်း ပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီလိုပေးချေနိုင်ဖို့ မူလက လျာထားနိုင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးရဲ့ ဘတ်ဂျက်မှလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြု ငွေမှလည်းကောင်းသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီးဌာနကို ညှိနှိုင်းခဲ့ရာမှာ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ မှ တောင်းခံသုံးစွဲသွားရန် သဘောထားပြန် ကြားခဲ့တဲ့အတွက် စီးပွားရေးရာကော်မတီ၊ ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးများသို့အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ၁၁/၂ဝ၁၈ အရ ဂျပန်ယန်း ၅၁၆ ဒသမ ၇၁၇ သန်းနှင့် ညီမျှသော ကျပ် ၆၂၇၈ ဒသမ ၁၁၂ သန်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါကိစ္စသည် ငွေကြေးထုတ်ယူသုံး စွဲမှုမဟုတ်ဘဲ ထောက်ပံ့မှုများကို သတ်မှတ် ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း ပေးချေနိုင်ရေးအ တွက် အရအသုံးစာရင်းများနှင့်သာ ဆောင်ရွက်ရခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေး အတိတ်ကံ မကောင်းခဲ့၍ မျိုးဆက်နှစ်ဆက် ခံစားခဲ့ရဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဆ??
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လူ ၂၆ ဦး၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး လူထက်ဝက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှ??